Home » Music » နားဦးတည့်ရာ သုံး – Soe Lwin Lwin (The big breadth the wide ring)
Youtube မှ ရှာဖွေပြီး တင်ထားပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူ ပိုင်ရှင် ကျေးဇူး တင်ပါရန်။
အရီးရဲ့ ​ခေါင်းစဉ်​ကြည့်​ပြီး ဘာ​ရေးထားပါလိမ့်​လို့…အနံကြီးကွင်းကျယ်​ကိုး..ဟီး။
. “ခေါင်းငုံ့ချစ်နေမယ်” သီချင်းလေးလည်း တော်တော်ပါးစပ်ထဲစွဲခဲ့တာ…
.ဆူပါမာ့ကက်ထဲ စားသုံးသူ တစ်ယောက် ကို သူခိုးရိုးစွပ် မိပြီး ထိထိရောက်ရောက် ပြန်မတောင်းပန် တဲ့ .အဖြစ်…ကိုတွေးပြီး ဒီစိုးလွင်လွင်ရဲ့ “အနံကြီး ကွင်းကျယ်” ကိုသတိရမိတာ ကွက်တိပါပဲဗျာ :))
.အဲ့ဆိုင်မျိုး ကို လူညီညီနဲ့ ၀ိုင်းသပိတ်မှောက်သင့်တယ်
ဒီသီချင်းလေးကို ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ စ ကြားဖူးကတည်းက သဘောကျတာ…။ မင်းသားက ကျော်သူထင်တယ်…။ မင်းသမီးကို အထင်လွဲပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ဂစ်တာနဲ့သွားဟဲတာ….။
အရီးပြောမှပဲ ဒီသီချင်းနဲ့ ဒီအဖြစ် ဆက်စပ်မိတယ်….။
အဲ့ဒါ တရားစွဲရင် လျော်ကြေးရတယ်မလားဟင်
ပြည်သူ့ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မရမချင်း တရားရေးရာ ဥပဒေတွေက ကလေး ကစားသလိုပဲ ဖြစ်နေအုန်းမှာ
အော် ဒါဒို့တိုင်း ဒို့ပြေ ဒို့ မြန်မာပြေ :angryy:
အဲဒီ သတင်းဖတ်လိုက်ရတာ စွပ်စွဲခံရသူဖက်က စဉ်းစားမိရင် စိတ်မကောင်းဘူး။
♪ ♪ ♪ နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်………..
အနံကြီးကွင်းကျယ် ကို ဝင်ရောက်အားပေးကြပါသော သူများ အား ကျေးဇူးပါ။ :))
beaprig.
မောင်ဘလှိုင်ရဲ့စာဖတ်ပြီး dictionary သွားရှာရတယ်။
အနော်ဆို တောင်းပန်ရမှာ ဘယ်တော့မှဝန်မလေးဝူး…
မိတူဂျာ ညီးတစ်နေ့တစ်နေ့ တစ်လွှဲဒွေပဲ လုပ်နေတော့မာလားဒဲ့… စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းမြင့်တာကို နားမလယ်ဂျဝူး
I m sorry does not mean my name is Sorry.
ငွေကြေး ထက် လူ့တန်ဖိုး ကို ပိုမြင့် အောင် ဘယ်လိုလုပ် ရမယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုပညာပေးသင့်သလဲ ဘယ်သူတွေ တာဝန်လဲ။
ဝါး နဲ့ ဇီ
သူရို့ကို ကို ခေါင်းပုတ်လိုက် ပြန်ကန်တော့လိုက်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ရဲ့ လက်စွဲတော် တွေလို့လဲ ထင်ပါ့။